विचित्रकी महिला, जो १६ वर्षदेखि हरेक शुक्रबार बेहुली बन्छिन् - Safalnews- News Portal from Nepal in Nepali.
विचित्रकी महिला, जो १६ वर्षदेखि हरेक शुक्रबार बेहुली बन्छिन्
सफल न्युज द्वारा २०७८ भाद्र २९ गते मंगलवार १३:२३ मा प्रकाशित
एजेन्सी – सुन्दाखेरि तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ । संसारमा हरेक सोच विचार भएका मानिसहरू भेटिन्छन् । मानिसहरूले अरु भन्दा फरक कार्य गर्न रुचाउँछन् र गर्दछन् । यहाँ मानिसका चाहना र इच्छा फरक – फरक हुन्छन् । कुनैले आफू भाइरल हुनको लागि गर्दछन् भने कसैले आफ्नो कुनै क्षणबाट प्रभावित भएर अचम्मको कार्य गर्न पुग्छन् ।
पाकिस्तानमा एकजना महिला हरेक हप्ताको शुक्रवार एक दिन बेहुली बन्ने गर्दछिन् । ति महिला हरेक शुक्रबार बेहुली जस्तै पहिरनमा सजिन्छिन्, सिँगारपटार गर्छिन् । त्यस्तो अनौठो शौखका कारण उनी पाकिस्तानमा पछिल्लो समयमा चर्चाको विषय बनेकी छिन् । ४२ वर्षीय ती महिलाको नाम हिरा जिशान हो । उनी लाहोरकी बासिन्दा हुन् । पछिल्लो १६ वर्षदेखि हिराले हरेक शुक्रबार आफूलाई बेहुलीको रुपमा सजाउँदै आएकी छिन् ।
तपाईँलाई हिराको बारेमा सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर हिराले आफु भाइरल हुनको लागि हरेक हप्ताको शुक्रवार बेहुली बन्ने गरेकी होइनन् । यसको पछाडि एउटा रहस्यमय कारण छ । १६ वर्षअघि हिराकी आमा निकै बिरामी परिन् । उनलाई उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएकाे थियो ।
आमाले आफ्नो अन्तिम अवस्थामा छोरी हिराको बिहे देखेर मर्न चाहेको बताएपछि अस्पतालमै एकजना रक्तदाता युवकसँग उनको बिहे तय गरियो र बिहे पनि सम्पन्न भयो । तर कारणबस बिहेको केही दिनपछि हिराकी आमाको मृत्यु भयो । आमाको मृत्युले हिरा निकै भावुक बनिन् ।
बिहेपछि उनका ६ बच्चा जन्मिए, त्यसमध्ये २ बच्चाको मृत्यु भयो । आफ्ना सन्तानको मृत्युले पनि उनलाई ठूलो पीडा भयो । त्यहीँ तनावको अवस्थाबाट मुक्ति पाउनका लागि उनले १६ वर्षदेखि हरेक शुक्रबार बेहुली पहिरन आएकी छिन् । अब तपाईँलाई अचम्म लाग्ला पीडामा बेहुली बन्नुको रहस्य के होला ? हिराले हप्ताको एक दिन शुक्रवार बेहुलीको पहिरनमा सजिँदा आफूलाई निकै खुसी मिल्ने बताएकी छन् ।
शारीरिक सम्बन्धका क्रममा महिला बाल्कोनीबाट खसिन्, कार भाँचियो, महिला बाँचिन् (भिडियो)
३५ वर्षमा १६ करोड बचत, महिलाले अपनाइन् यस्तो तरिका !
थुप्रै मानिस भएको ठाउँमा सम्भोग गरिरहेको जोडी देखेपछि घुम्न आएकाहरुले यस्तो गरे
शारीरिक सम्बन्धका क्रममा महिला बाल्कोनीबाट खसिन्, कार भाँचियो, महिला…
थुप्रै मानिस भएको ठाउँमा सम्भोग गरिरहेको जोडी देखेपछि घुम्न आएकाहरुले…
आफ्नो श्रीमानलाई उत्तेजित पार्न भित्री वस्त्र सुकाएको भन्दै प्रहरीमा…